Ogaden News Agency (ONA) – Dilal Qorshaysan oo ka bilowday Jigjiga
Waxaa ka bilowday Jigjiga dilal qorshaysan oo sida uu noo soo sheegay wariyaheena goobta aan la garanaynin cida ka dambaysa. Dilalkaa qorshaysan ayaa inta badan lagu fuliyaa saraakiil iyo dablay ka mid ah maxaysatada nacabka shacabka ee Hawaarinta loo yaqaano.
Waxay subaxnimadii Khamiista ee 16ka bishan dadkii daganaa xaafadda 5aad ee Jigjiga ku waabariisteen 2ba ka mid ahaa Hawaarinta (Liyu police) oo maydkoodii la soo dhigay halkaa. Labadaa nin ayuu midkood lahaa darajada loo yaqaano Shii-halaqe magaciisana naloogu sheegay Cabdi fatah, midka kalena wuxuu ahaa dabale magaciisa la yidhaahdo Ibraahim Cali.
Arimaha dilka qorshaysan ah ee ka socda Jigjiga ayaa qofka la arko isagoo warkooda raadinaya lala yaabaa oo jawaabta uu helayo ay tahay waa iska caadiye hawlahaaga ka raaco hana sii dhexgalin arimahaa. Waxaadna moodaa ayuu wariyaheena in bulshada laga qarinayo dilalka ku socda ciidamadii Hawaarinta.
Dad aad xog-ogaal uga aha arimah hoose ee maamul ku sheega gumaysiga u adeega ayaa arimahan ku tilmaamaya inay tahay khilaaf xoogan oo Hawaarinta dhexdooda ah. Arima kalena way jiraan oon daaha ka rogi doono waqtiga ku haboon.